Indlu ye-Cedar's Cabin - I-Airbnb
Indlu ye-Cedar's Cabin
Portree, i-United Kingdom
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Rosalind
U-Rosalind Ungumbungazi ovelele
Indawo yethu isendaweni elula yokuhamba yezindawo zokudlela, izitolo nezindawo zasePortree. Itholakala endaweni yokuhlala yedolobhana futhi iseduze nogu, inokubukwa okuhle kolwandle. I-Cedar's Cabin isiqedwe ngezinga eliphezulu futhi inikeza indawo yokunethezeka yokuziphakela abantu abangu-2. Ukuhlobisa kuyisitayela sesimanje 'Scandi'. Inokushisa okungaphansi, igqunywe kakhulu futhi inesitofu sogodo esivuthayo, okusho ukuthi ikhabethe lifaneleka unyaka wonke.
Indawo yokuhlala eyinhloko inomoya futhi ivulekile. Inombhede kasofa, isihlalo sokuzivikela sesimanje kanye ne-pouffe endaweni yokuhlala. I-TV enkulu yesikrini esiyisicaba ifakwe odongeni. Ukushisisa okungaphansi kuyo yonke indawo kanye nesishisi selogi endaweni yokuhlala (izingodo kanye nokubasa kuhlinzekwe.) Indawo yokudlela inetafula eliyindilinga nezihlalo ezi-4. Ikhishi linefriji/isiqandisi, i-microwave, iwasha/isomisi, ihhavini likagesi kanye nehobhu, umshini wokugeza izitsha, iketela, i-toaster, umshini wekhofi weTassimo, futhi ihlomele ngokuphelele ukuziphekela.
Igumbi lokulala linendawo yokuhamba ngezinyawo ekhabetheni lezingubo kanye namadrowa okugcina. Umbhede usayizi weNkosi one-hypo allergenic bed kanye namashidi kakotini angu-100%. I-TV yesikrini esiyisicaba esincane kanye nesidlali se-DVD sigxunyekwe odongeni.
Igumbi lokugezela lineshawa elinamandla, iyunithi yesinki, i-WC kanye nethawula elishisayo.
Ezinye izinto ezinikeziwe - itafula nezihlalo zangaphandle, i-BBQ, isomisi sezinwele, i-mini iron, i-vacuum engasindi.
4.93 · 120 okushiwo abanye
Indawo yokuhlala enobungane yasePortree. Buyela emuva kahle kusukela emgwaqeni. Inendlela yokufinyelela yomphakathi ogwini eduze kwendawo (1 iminithi ukuhamba.)
Izivakashi zishiywa ngokuthula ukuze zijabulele amaholide azo kodwa abanikazi baseduze uma kwenzeka kuba nesidingo. Abanikazi bangathintwa ngocingo, i-imeyili noma mathupha.
URosalind Ungumbungazi ovelele